ရိုဟင်​ဂျာ စကားနှင့်​ ဘင်္ဂါလီ စကားကွဲပြား ခြားနားခြင်း Different of Rohingya and Bengali Langusge | Danya Wadi
Browsing: » Home »English Version»Articles»ရိုဟင်​ဂျာ စကားနှင့်​ ဘင်္ဂါလီ စကားကွဲပြား ခြားနားခြင်း Different of Rohingya and Bengali Langusge	Leaveacomment
ရိုဟင်​ဂျာ စကားနှင့်​ ဘင်္ဂါလီ စကားကွဲပြား ခြားနားခြင်း Different of Rohingya and Bengali Langusge	Posted by danyawadi on November 2, 2016 in Articles, ဗဟုသုကဏ္ဍ, ဆောင်းပါးများ	Website Link:
http://rlprogramme.wordpress.com … Facebook page: Rohangnya Academic
What is differrent Rohingya and Sait Kainnya (Chittagonion) language ?
Posted on February 25, 2016 by rlprogramme
What is differrent Rohingya language and Sait Kainnya, Chittagonion language ?
ရိုဟင်ဂျာ စကား နှင့် စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီ စကား တွင် အပြောအဆို လေယူလေသိမ်း၊ ဝေါဟာရ စကားလုံး ကွဲပြား ခြားနားမှု အများ အပြားရှိသည်။ လက်ဆုပ် လက် ကိုင် ပြနိုင် သော အဓိက ကွဲပြားမှု (၂) ခု ရှိတယ်။
(၁)… စစ်တကောင် စကားတွင် “ရ” အက္ခရာ ( R ) အသံ ကို Rolling tongue (လျှာလိပ်သံ) လျှာ ကို လိပ်၍ အသံထွက်သည်။ စကားပြော တိုင်း “ရ” အက္ခရာ ( R ) အသံ ကို Rolling tongue (လျှာလိပ်သံ) အရေ အတွက်အားဖြင့် အများဆုံးပြော ထွက် သည်။
သို့သော် ရိုဟင်ဂျာ စကား စစ်စစ်တွင် “ရ” အက္ခရာ ( R ) အသံကို Rolling tongue (လျှာလိပ်သံ) မှာ လုံ့ဝ မထွက် သလောက် စကားလုံး အလွန် နည်းပါးသည်။
(၂)… ရိုဟင်ဂျာ စကားတွင် (င နှင့် ည) အက္ခရာ ပြတ်သားစွာ ထွက်သည်။ သို့သော် စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီ စကား တွင်( င နှင့် ည ) အက္ခရာ လုံဝ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ စကား တွင် (င နှင့် ည) ပါသော အက္ခရာ လည်း မရှိပေ။
ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာ စကားကို အရဗီ အက္ခရာ ဖြင့်လည်း ကောင်း၊၊ လက်တင် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ဖြင့် ဖြင့် လည်း ကောင်း ရေးသားသူများ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ရိုဟင်ဂျာ စကားစစ်စစ် ကို ကောင်းစွာ မတတ်ပေ။ စစ်တကောင်း စကားကို ရိုဟင်ဂျာ စကားဟု ပြောဆို နေသူများ လည်းရှိသည်။ ရိုဟင်ဂျာ စကား အမှန်ကို မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ မင်းပြားမြို့ နယ် ၊ကျောက်တော်မြို့နယ် သို့ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း လာရောက် လေ့လာရန် လိုအပ် မည်ဖြစ် သည်။ စစ်တကောင်း စကား ပြောသူများက ရိုဟင်ဂျာ စကားဟု ပြော ဆို ရေးသားနေ သော် လည်း လုံ့ဝ ကွဲလွဲ သည်ကို သိရှိနိုင်ရန် သတင်းစကား ပါးလိုက် ပါသည်။ မိမိတို့ မသိဘဲ သိသယောင်ယောင် နှင့် ထင်ရာ မစိုင်းဖို့ စူးစမ်းလေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းနိုးဆော် ပါသည်။
Rohangya khauta ar Sitangya khauta meijje Ki forok ?
Rohangya Zoban Lekhoi ya Zimma dar hokkol ore ikhauta yan yaad rakhi ba. Rohangĵa zonban lekha fora goribo de “script” meijje Rohangĵa awaz or horof faáza foribo. Zodi awaz or horof baki ťai gele goi, Rohangya Zoban or Elom-o aďora ofuro ťai zebo goi.
Mesál: – (ĝ = င = nga) , (ĵ = ည = nya), awaz or horof Rohangya Zoban or Elom-ot faa nó gele, onara ken gori (ĝ = င = nga) , (ĵ = ည = nya), awaz ore Rohangya Zoban-ot adai goriba. Rohangĵa Khauta loi Sait kainĵa (Chittagon) khauta loi lekha forah meijje khas gori dui (2) yan forok.
1 . ( Ř / ř ) lofzo Rohang Cór or maińcot-ti bici kom estemal hoi. Sait kainĵa (Sańria wala-tti) bici estemal hoi.
2 . Rohang cor or maicot-ti (ĝ = င = ) , (ĵ = ည = nya), awaz bici saf saf gori estemal hoi. Sait kainĵa (Sańriya wala-tti) bilkul estemal no ngaów.
eg: ĝappi – ငပိ၊ Ĝappali – ငပလ၊ီ bańĝa – ခြေကျိုး၊ nya – မင်္ဂလာဆောင်
bunĵa – အကျော၊် raińĵa – ချက်ပြုတ်ပြီးသား၊ koińya- သင်္ဘောသီး၊koińĵa-သတိုးသမီး
Toile Rohangĵa zoban lekhoiya hokkol onara re (ĝ = င = nga), (ĵ = ည = nya), horof ore Arabi rosomol -ot meijje no ťaikhi le Ken gori Rohangĵa awaz ore fura furi adai khotgori fariba. (ĝ = င = nga) , (ĵ = ည = nya), horof no ťaile , hin ore Sait kainĵa, Sańriya (Chittagon Zoban boi kua zei boi.
Note:- Arabic scholars! please check and research Rohingya sound and definite .
Different Rohingya Language and alphabet Sittagong Bsngali Language, listen and study given the Bsngali Language Video
Click here Vedio Link
What is differrent Rohingya and Sait Kainnya, Chittagonion language?ရိုဟင်ဂျာ စကား နှင့် စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီ စကား တွင် အေ…
Posted by Mar Mar Sein on Monday, May 9, 2016
ရိုဟင်ဂျာ စကား နှင့် စစ်တကောင်း စကားနှင့် မည်ကဲ့သို့ ကွဲလွဲကြောင့် နားထောင်ကြည့်ပါ။
အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရိုဟင်ဂျာ စကားကို မသိ၊ မပြော တတ်ဘဲ စစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီ စကား ကို ရိုဟင်ဂျာ စကားဟု ထင်ယောင် ထင် မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံ ဖန်တီး ပြောဆိုရေးသား နေသည်ကို သတိထား ဆင်ခြင်နိုင်ရန် အောက်ပါ Video ကိုကြည့်ရှူပြီး ခွဲခြားနိုင်ရန် တင်ပြပါ သည်။
← GP နှင့် SP ခြားနားခြင်း သိကောင်းစရာ	မှတ်ပုံတင် မရသေးသူများ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပဒေများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ →